चिनी उद्योगबाट प्रणालीमा साढे १२ मेगावाट विद्युत थपिँदै
आगामी एक वर्षभित्र देशमा सञ्चालित चिनी उद्योगबाट प्रसारण प्रणालीमा साढे १२ मेगावाट विद्युत थपिने भएको छ । उक्त विद्युतले हिउँदको लोडसेडिङ न्यूनिकरण गर्ने अपेक्षासहित खरिद प्रक्रिया सुरु गरिएको छ । सोमबारमात्र ६ मेगावाट विद्युत खरिद गर्न करार सम्झौता गरेको सरकारले सञ्चालनमा रहेका थप दुई चिनी उद्योगबाट साढे ६ मेगावाट विद्युत खरिद गर्ने तयारी गरेको छ ।
जलविद्युत कम्पनीले ६ वर्षमा १ अर्ब नाफा कमायो
जलविद्युत लगानी तथा विकास कम्पनीले स्थापनाको ६ वर्षमा १ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी नाफा कमाएको छ । विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थामा जम्मा गरिएको निक्षेपको ब्याजबाट कम्पनीले नाफा कमाएको हो ।कम्पनीको चुक्ता पुँजी १० अर्ब रुपैयाँ छ । यो रकम उसले दर्जन बैंक तथा वित्तीय संस्थामा जम्मा गरेको छ ।
महाकाली सन्धिले व्यवस्था गरेको ‘महाकाली नदी आयोग’ गठन नहुँदा दुई देशबीच जलस्रोत बाँडफाँटलगायत दर्जनौं विवादास्पद मुद्दा जटिल बन्दै गएका छन् । भारतसित दर्जनौं पटक बैठक बसी छलफल हुँदासमेत पानी बाँडफाँटलगायत मुद्दा निरुपण नभएपछि आयोगको अभाव खट्किन थालेको छ ।
NEA should start focusing on strengthening its existing power infrastructure
The way the country’s power systems and services were disrupted during the recent flooding in the eastern plains has exposed many of our systemic flaws and vulnerabilities. Ensuring regular energy supply becomes paramount to operate emergency services like hospitals, health posts and communication units during such disasters.
पञ्चेश्वरबाट वर्षैभरि ९२५ मेगावाट उत्पादन हुने
पञ्चेश्वर वहुउद्देश्यीय आयोजनाबाट वर्षभरी ९ सय २५ मेगावाट बिजुली (फर्म पावर) उत्पादन हुनेगरी अघि बढ्न नेपाल र भारत सहमत भएका छन् । पञ्चेश्वर विकास प्राधिकरण (पीडीए) गभर्निङ बडीले विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर)लाई अन्तिम रूप दिन गठन गरेको विज्ञहरूको दिल्लीमा भएको बैठकमा वर्षैभरि सो क्षमता बराबरको फर्म पावर उत्पादन गर्न सहमत भएका हुन् ।
प्राधिकरण अन्तर्गतका निर्माणाधीन जलविद्युत् आयोजनाहरूलाई समयमै काम सम्पन्न गर्न ऊर्जा मन्त्रालयको निर्देशन
नेपाल विद्युत् प्राधिकरण तथा प्राधिकरणअन्तर्गतका कम्पनीहरूबाट निर्माणाधीन जलविद्युत् आयोजनाहरूलाई समयमै काम सम्पन्न गर्न ऊर्जा मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ । सम्बन्धित आयोजनाका प्रमुखहरूसँगको भेटको क्रममा ऊर्जामन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले यस्तो निर्देशन दिएका हुन् ।
सिमेण्ट उद्योगबाट विद्युत् उत्पादन गरिँदै
मुलुकमा पहिलोपटक सिमेण्ट उद्योगबाट बाहिर फाल्ने तातो हावालाई प्रयोग गरेर विद्युत् उत्पादन गरिने भएको छ । मुरारका समूहले नवलपरासीमा स्थापना गरेको अर्घाखाँची सिमेण्ट उद्योगको चिम्नीबाट फालिएको तातो हावालाई प्रयोग गरेर चार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्न लागिएको हो ।
तीस मेगावाट क्षमताको पिके हाइड्रोपावर प्रालिमा रुसले रू. पाँच अर्ब १० करोड लगानी गर्ने भएको छ । उद्योग मन्त्रालयअन्तर्गतको उद्योग लगानी तथा प्रवद्र्धन बोर्डको बुधवार बसेको बैठकले उक्त आयोजनामा रुसको लगानीलाई स्वीकृति दिएको उद्योग विभागका महानिर्देशक शङ्कर अर्यालले जानकारी दिए । पिके हाइड्रोपावर रामेछाप, ओखलढुङ्गा र दोलखाको सिमानामा पर्ने लिखु खोलामा अवस्थित छ ।
पञ्चेश्वरको डिपिआरबारे छलफल गर्न टोली दिल्ली जाँदै; नेपाललाई हित हुने गरी सम्झौता गर्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बहुप्रतीक्षित पञ्चेश्वर आयोजनाका विषयमा भारतसँग नेपालको हित हुने विषयमा मात्र सम्झौता गर्न निर्देशन दिएका छन् । पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजनाको ‘विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डिपिआर)’लाई अन्तिम रूप दिन गठन गरिएको विज्ञ समूह दोस्रो बैठकमा भाग लिन सोमबार दिल्ली जाँदै छन् ।
एक दशक पछि चमेलियाको विद्युत् परीक्षण
ष्ट्रिय गौरवको चमेलिया जलविद्युत् आयोजनामा झण्डै एक दशकपछि आइतबार विद्युत् उत्पादन परीक्षण हुँदैछ । सन् २००७ बाट निर्माण सुरु गरिएको आयोजनाको निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ । सन् २०११ मा सम्पन्न गर्ने भनिएको शैल्यशिखर नगरपालिका १ शिखर बलाँचमा निर्माणाधीन ३० मेगावाटको चमेलिया जलविद्युत् आयोजनाको काम झण्डै ११ वर्षपछि पूरा हुने भएको हो ।
विद्युत प्राधिकरणको २ खर्ब सम्पत्ति बाँडफाँट गरिँदै
नेपाल विद्युत प्राधिकरण टुक्रिँदै गएपछि यसको सम्पत्ति पनि तत्तत्का निकाय वा कम्पनीमा बाँडफाँट गर्ने तयारी अघि बढाइएको छ । हालसम्म प्राधिकरणको सम्पत्तिको मूल्यांकन करिब २ खर्ब रुपैयाँ गरिएको छ । एउटै निकायअन्तर्गत विभिन्न कम्पनी खोलेपछि सम्पत्ति तथा भौतिक संरचना सम्बन्धित निकायमा सार्न लागिएको हो ।
जनताको गुनासो सुन्न ऊर्जा मन्त्रालयमा ‘टोल फ्री’ नम्बर
ऊर्जा मन्त्रालयले फोन गर्दा पैसा नलाग्ने ‘टोल फ्री’ नम्बर सञ्चालन गरेको छ । जनताका गुनासा फोनबाट सुनेर ऊर्जा क्षेत्रलाई पारदर्शी र गतिशील बनाउन भन्दै मन्त्रालयले टोल फ्री नम्बर ११५१ सञ्चालन गरेको हो । ऊर्जा मन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले सोमबार ११५१ नम्बरमा आएको पहिलो फोन उठाएर सेवा सुचारु गरेका छन् ।
बलाँच-अत्तरिया १३२ केभी प्रशारणलाइन परीक्षण सुरु
दार्चुलामा निर्माणधीन चमेलिया जलबिद्युत परियोजनाका लागि बलाँच-अत्तरिया १३२ केभी प्रशारणलाइन परीक्षण कार्य आइतबारदेखि सुरु भएको छ । बलाँच-अत्तरिया १ सय ३२ केभीको प्रशारणलाइन र सबस्टेशनको परिक्षण गर्न लागिएको हो । जडान गरिएको उपकरणहरु, १ सय ३१ किलोमिटर प्रशारणलाईन, दार्चुलाको बलाँचमा रहेको सबस्टेशन लगायतको आयोजनाका उपकरणहरुको परिक्षण कार्य सुरु भएको आयोजना प्रमुख अजय कुमार दाहालले जानकारी दिए ।
The Nepal Electricity Authority (NEA) is solely in charge of generation, transmission and distribution of electricity in Nepal, and so its efficiency, or lack of it, hasaconsiderable impact on the national economy. The state-owned power utility, which celebrated its 32nd birthday recently, is the largest consumer of electricity in the country, considering the amount lost in transmission and distribution.
विद्युत् निर्यात गर्न सके नेपालको व्यापारघाटा कम गर्न सकिने: विज्ञ
विज्ञहरूले पर्याप्त विद्युत् उत्पादन गरेर निर्यात गर्न सके नेपालको व्यापारघाटा कम गर्न सकिने सुझाव दिएका छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले बिहीबार काठमाडौंमा गरेको आर्थिक वृद्धिका लागि भरपर्दो ऊर्जा तथा पूर्वाधारमा लगानी विषयक कार्यक्रममा सहभागी विज्ञहरूले ऊर्जा तथा पूर्वाधारमा लगानीसँगै उत्पादन बढाएर व्यापारघाटा कम गर्न सकिने बताएका हुन् ।
१३.६ मेगावाटको थापाखोला जलविद्युतको परीक्षण उत्पादन
मुस्ताङको थासाङ गाउँपालिका–१ टुकुचेमा निर्माण भएको थापाखोला जलविद्युत् आयोजनाले परीक्षण उत्पादन शुरु गरेको छ । माउन्ट कैलाश इनर्जी प्रालिले निर्माण गरेको १३.६ मेगावाट क्षमताको आयोजनाले विद्यु्त उत्पादन शुरु गरेको हो । परीक्षण सफल भएपछि उत्पादित विद्युत् केन्द्रीय प्रसारण लाइनमा जोडिने आयोजनाका साइट व्यवस्थापक सुदीप खड्काले बताए ।
पश्चिम सेती आयोजना निर्माणको जिम्मा पाएको थ्रि–गोर्जेजले ७ महिनापछि जेभिए अनुमोदन गर्यो
७ सय ५० मेगावाटको पश्चिम सेती जलाशय जलविद्युत आयोजना निर्माणको जिम्मा पाएको चीनको थ्रि–गोर्जेज कर्पोरेशनले संयुक्त कम्पनी खोल्नेबारेको ‘संयुक्त उपक्रम सम्झौता (ज्वाइन्ट भेन्चर एग्रिमेन्ट– जेभिए)’ अनुमोदन गरेको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरण र थ्रि–गोर्जेजको सहायक कम्पनी सिडब्लुई इन्भेष्टमेन्ट कर्पोरेशनबीच २०७३ माघ ३ गते जेजिएमा हस्ताक्षर भएको थियो ।
उद्याेगकाे विद्युत महसुल तत्काल बढ्दैन : मन्त्री शाही
नेपाल विद्युत प्राधिकरणले विद्युत महसुल बढाउन प्रस्ताव गरे पनि सरकारले तत्काल नबढाउने भएको छ । ऊर्जामन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले बिहीबार उद्योगी व्यवसायीसँगकाे भेटमा यस्ताे बताएका हुन् । नेपाल उद्योग परिसंघका पदाधिकारीसँगको भेटमा ऊर्जामन्त्री शाहीले महसुल बढाउने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नहुने बताए ।
४० मेगावाटकाे सुपर न्यादीले उत्पादन अनुमतिपत्र पायो
विद्युत विकास विभागले लमजुङस्थित ४०.२७ मेगावाटको सुपर न्यादी जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्न उत्पादन अनुमतिपत्र प्रदान गरेको छ । सिउरी न्यादी पावर प्रालिले निर्माण गर्ने आयोजनाको बुधबार अनुमतिपत्र दिइएको हो । कम्पनीले अनुमतिपत्र लिन गत बिहीबार विभागमा आवेदन दिएको थियो ।
वैकल्पिक उर्जा प्रविधि प्रवर्द्धनमा संलग्न निजी क्षेत्र आन्दोलित
नेपाल लघु जलबिद्युत संस्थाद्वारा बैकल्पिक उर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रलाई ज्ञापनपत्र पेश गरिएको छ। चार बुँदे माग रहेको ज्ञापन पत्र बैकल्पिक उर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक ज्युलाई बुझाईएको हो। समयमै मागको सम्बोधन नभएमा संपूर्ण नवीकरणीय उर्जा संवद्ध संस्थाहरु सहितको संलग्नतामा चरणवद्ध आन्दोल गर्ने नेपाल लघु जलबिद्युत संस्थाद्वारा चेतावनी दिईएको छ।
भारतले गण्डक नहरमा पानी रोकेपछि गण्डक जलविद्युत् गृहबाट बिजुली उत्पादन ठप्प
गाउँ डुबानमा परेको भन्दै सुस्तावासीले गण्डक नहर बाँधको डिल काटेपछि भारतीय पक्षले मुख्य पश्चिम नहरमा पानी बन्द गरेको छ। भारतले पानी रोकेका कारण गण्डक जलविद्युत् गृहबाट बिजुली उत्पादन ठप्प भएको छ। भारतीय पक्षले साइफन र खोला सफा नगर्दा डुबानमा परेको भन्दै सुस्ता गाउँपालिका-१ र २ का स्थानीयले १० दिनअघि पश्चिम नहरमा रहेको बाँधको डिल काटेका थिए। त्यही कारण भारतले उक्त नहरमा पानी रोकेको हो।
वैकल्पिक ऊर्जाका अधिकांश लक्ष्य पूरा भएनन्
राष्ट्रिय ग्रामीण तथा नवीकरणीय ऊर्जा कार्यक्रम (एनआरआरईपी)को पहिलो चरणको कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । पहिलो चरणको कार्यक्रममा एनआरआरईपीका अधिकांश लक्ष्य प्राप्तीमा सरकार असफल देखिएको छ । भूकम्प, नाकाबन्दीलगाायतका समस्या देखाउँदै सरकारले कार्यक्रमको सुरुवातमा तोकिएको लक्ष्यअनुसारको उपलब्धी हासिल गर्न नसकेको स्वीकार गरेको छ ।
स्थानीय सहभागितामा जलविद्युत् आयोजना सहजीकरण
तनहुँ जलविद्युत् आयोजना निर्माणको सहजीकरणका लागि स्थानीय सहभागिताको प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । स्थानीयबासीले विभिन्न माग राखेर आयोजना निर्माणमा अवरोध गरिरहेको र यसले आयोजनाको लागत र समय बढिरहेका बेला आयोजनाले स्थानीय सहभागी गराएर सहजीकरणको प्रक्रिया अघि बढाएको हो ।
अवरुद्ध दरमखोला जलविद्युत् परियोजना आजदेखि सञ्चालनमा
गुल्मीको दरमखोला लघु जलविद्युत् परियोजनाको विद्युत् सेवा आजदेखि सञ्चालनमा आएको छ । पहिरोले बगाएको बाँध तथा नहरलाई अस्थायीरुपमा नहर निर्माण गरेपछि विद्युत् सेवा सञ्चालन भएको विद्युत् सञ्चालक समितिका अध्यक्ष धर्मेन्द्रकुमार मल्लले जानकारी दिए ।
प्रधानमन्त्री देउवाको भारत भ्रमण : अरुण तेस्रो र पञ्चेश्वर निर्माणमा जोड
भारतको राजकीय भ्रमणमा रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले बिहीवार भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीको प्रतिनिधिमण्डलसँगको वार्तापछि विभिन्न आठ समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेको छ । पुराना सन्धिसम्झौताको कार्यान्वयनमा जोड दिइने बताउँदै बुधवार भारतको नयाँदिल्ली....
देउवा र मोदीले गरे कटैया-कुशाहा प्रशारणलाइनको उद्घाटन
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले कटैया-कुशाहा १ सय ३२ केभीए प्रसारणलाइनकोे संयुक्त रुपमा उदघाटन गरेका छन् । प्रधानमन्त्री देउवा भारत भ्रमणमा रहेका बेला हैदराबाद हाउसबाट बिहीबार दुई प्रधानमन्त्रीले संयुक्त रुपमा स्वीच थिचेर प्रशारणलाइनको उदघाटन गरेका हुन्।
माथिल्लो त्रिशूली ३–बीको पीपीएमा हस्ताक्षर
३७ मेगावाटको माथिल्लो त्रिशुली थ्री–बी जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् खरीद सम्झौता (पीपीए) सम्पन्न भएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र नेपाल टेलिकमको मुख्य लगानीमा निर्माण हुन लागेको उक्त आयोजनाको पीपीएमा सम्झौता भएको हो । प्राधिकरण र आयोजनाको प्रवद्र्धक त्रिशूली जलविद्युत् कम्पनीबीच सम्झौता भएको हो ।
विगतका सम्झौता कार्यान्वयन हुनुपर्छ : उद्योगी
भारत भ्रमणका क्रममा ठूला लगानीसहित जलविद्युत्मा लगानी भियाउनका लागि केन्द्रित हुन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई बाढी र डुबानबाट आक्रान्त पूर्वका उद्योगी व्यवसायीहरूले सुझाव दिएका छन् । उनीहरूले वितगमा भएका सम्झौता कार्यान्वयन गराउनेतर्फ पनि ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
चारसय ६५ मेगावाट क्षमताको दोलखाको लामाबगरमा निर्माण भइरहेको बहुचर्चित माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण कार्य वर्षाका कारण ढिलाइ हुने भएको छ। डलरको भाउमा आएको उत्तारचडाव, वर्षा र लामोसाँघु जिरी सडकको स्तरोन्नतिका कारण भएको ढिलाइले आयोजनाको लागत झण्डै सात अर्ब बढ्ने समेत अनुमान गरिएको छ।
५५ सय मेगावाटका ४३ आयोजनालाई ताकेता
ऊर्जा मन्त्रालयले ५ हजार ४ सय ८१ मेगावाट बराबरका ४३ आयोजनालाई तत्काल प्रगति प्रतिवेदन बुझाउन ताकेता गरेको छ । ६ वर्षदेखि उत्पादन अनुमतिपत्र (लाइसेन्स)का लागि आवेदन दिएका ती आयोजनाहरूलाई मन्त्रालयको विद्युत्् विकास विभागले ३५ दिनभित्र सबै विवरण बुझाउन ताकेता गरेको हो ।